စတာလင်းဟာ နေမာထက် ဘာကြောင့် ပိုကောင်းသလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှုးဟောင် - SPORTS MYANMAR
စတာလင်းဟာ နေမာထက် ဘာကြောင့် ပိုကောင်းသလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှုးဟောင်
ချဲလ်ဆီး နဲ့ မာဆေး တိုက်စစ်မှုးဟောင်း တိုနီကတ်စ်ကာရီနို က ရာဟင်စတားလင်းဟာ နေမာထက် ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း ကစားသမား ၅ ဦးထဲက တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပြီး မန်စီးတီး စတား အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘ၀မှာ ဘလွန်းဒီအောဆု ကို ဆွတ်ခူးဖို့ အတွက် ပစ်မှတ် ထားသင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာစီးတီး စတားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က အင်္ဂလန် က ဘူဂေးရီးယားကို ၄ – ၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ လက်ရွေးစင် အသင်းရဲ့ နိုင်ပွဲ အတွက် အဓိက ကျတဲ့ ခြေစွမ်းကောင်းကို ပြသ နိုင်ခဲ့ပြီး တစ်ဂိုးသွင်းကာ တစ်ဂိုး ဖန်တီးပေး ခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက် နောက်တန်းကို တစ်ပွဲလုံး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။
နေမာဟာ ဆိုရင်လည်း ခြေကျင်းဝတ် ဒဏ်ရာကြောင့် ၃ လကြာ အနားယူ ခဲ့ရာက ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ကိုလံဘီယာ နဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဘရာဇီး အတွက် ဂိုးသွင်းပေး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီတွေက စွမ်းဆောင်ချက်တွေ အရ စတားလင်းဟာ နေမာ အများကြီး သာတယ်လို့ ကက်စ်ကာရီနိုက ဆိုသွား ပါတယ်။
ကက်စ်ကာရီနို က “နေမာလား စတားလင်းလား – ခင်ဗျား ဘယ်သူ့ကို လိုချင်သလဲ ? ကစားသမား တစ်ဦး အနေနဲ့ ကျွန်တော် စတားလင်းကို အလို ရှိပါတယ်။ နေမာရဲ့ ကွင်းပြင်ပ နေထိုင်မှု ပုံစံတွေကို လျစ်လျူရှု လိုက်တယ် ထားပါဦး။ ကျွန်တော် ကတော့ စတာလင်းဟာ ကွင်းထဲမှာ နေမာထက် တကယ် ပိုကောင်း ပါတယ်။
သူရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေဟာ နေမာထက် ပိုကောင်း နေသလို သူဟာ ပီအက်ဂျီထက် ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ အသင်းမှာ ကစား နေတာပါ။ ပွဲအတွင်းမှာ ဘယ်ဘောလုံးသမား မှ မလုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို နေမာ လုပ်ပြ ခဲ့တာကို ကျွန်တော် မြင်ခဲ့ဖူး ပါတယ်။ အလှပြ ဖျော်ဖြေမှု ပေးစွမ်းတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးလိုမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အသင်း အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ့် ကစားသမား တစ်ဦး နဲ့ နေမာ ရဲ့ သွင်းဂိုးနှုန်းလောက် ဂိုးတွေ သွင်းယူ နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ ကစားသမားကို အလို ရှိတယ် ဆိုရင် စတားလင်းဟာ ခင်ဗျားစိတ်ကြိုက်လူ ပါပဲ။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
စတားလင်းနဲ့ နေမာ တို့ဟာ တောင်ပံ တိုက်စစ်တွေမှာ ကစား ကြသူတွေ ဖြစ်ပေမယ့် အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ပီအက်ဂျီစတားထက် သွင်းဂိုး ဂိုးဖန်တီးမှုတွေ ပိုမို လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင် စီးတီးဟာ အင်္ဂလန် ပြည်တွင်း ဖလား ၃ လုံးစလုံးကို သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လည်း စတားလင်းဟာ ဆုဖလား ရယူမှု အပိုင်းမှာလည်း နေမာထက် သာနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နေမာဟာ ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေကြောင့် စတားလင်းထက် ပွဲထက်ဝက် နီးပါး လျော့နည်းပြီး ကစား ခဲ့တာကိုတော့ ထည့်စဉ်းစား ရမှာပါ။
နေမာဟာ ပီအက်ဂျီကို ပြောင်းရွေ့ လာခဲ့ပြီးနောက် ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေနဲ့ တောက်လျှောက် ရုန်းကန် ခဲ့ရပြီး အဲဒီအချိန်အတွင်း ရာဟင်စတာလင်းဟာ နည်းပြ ပက်ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ လက်အောက်မှာ တစ်ရာသီထက် တစ်ရာသီ ပိုမို ထွန်းတောက် လာခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ကတ်စ်ကာရီနိုက “သူဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကစားသမား ၅ ဦး ထဲမှာ ပါဝင်တယ်လို့ ကျွန်တော် အခိုင်အမာ ဆိုချင်ပါတယ်။ စတားလင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို စ်ိတ်လှုပ်ရှားစေတာ ကတော့ သူ့ရဲ့ တိုးတက်မှုပါ။ ဒရမ်မာဆန်ဆန် တိုးတက်မှုလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ခင်ဗျား သူ့ကို မနက်ဖြန် အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက်ထဲကို ချလိုက်မယ် ဆိုရင် မန်ချက်စတာစီးတီးဟာ သူ့အတွက် ပေါင်သန်း ၁၅၀ ပေးရင်တောင် ယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ သူ ဒီလို ပုံစံအတိုင်းသာ တိုးတက်နေအုံးမယ် ဆိုရင် သူဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်လာ နိုင်ပြီး ဘလွန်းဒီအော လမ်းကြေင်းပေါ်မှာလည်း ရှိလာနိုင် ပါတယ်။
အကယ်၍ သူ မန်ချက်စတာစီးတီး နဲ့ အတူ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူးပြီး ကြီးမားတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု အနေနဲ့ ပါဝင် ခဲ့မယ်..ပြီးတော့ ရာသီတစ်လျှောက်လုံး ဂိုးတွေ အများကြီး သွင်းယူ နိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် သူဟာ ဘလွန်းဒီအောဆုကို ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ အရမ်း ကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေး ရသွား ပါလိမ့်မယ်။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
စတာလငျးဟာ နမောထကျ ဘာကွောငျ့ ပိုကောငျးသလဲဆိုတာ ပွောပွလိုကျတဲ့ ခြဲလျဆီး တိုကျစဈမှုးဟောငျး
ခြဲလျဆီး နဲ့ မာဆေး တိုကျစဈမှုးဟောငျး တိုနီကတျဈကာရီနို က ရာဟငျစတားလငျးဟာ နမောထကျ ပိုမို ကောငျးမှနျတဲ့ ကမ်ဘာ့ ထိပျတနျး ကစားသမား ၅ ဦးထဲက တဈဦး ဖွဈတယျလို့ ဆိုလိုကျပွီး မနျစီးတီး စတား အနနေဲ့ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝမှာ ဘလှနျးဒီအောဆု ကို ဆှတျခူးဖို့ အတှကျ ပဈမှတျ ထားသငျ့တယျလို့ တိုကျတှနျး လိုကျပါတယျ။
မနျခကျြစတာစီးတီး စတားဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ စနနေကေ့ အင်ျဂလနျ က ဘူဂေးရီးယားကို ၄ – ၀ နဲ့ အနိုငျ ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ လကျရှေးစငျ အသငျးရဲ့ နိုငျပှဲ အတှကျ အဓိက ကတြဲ့ ခွစှေမျးကောငျးကို ပွသ နိုငျခဲ့ပွီး တဈဂိုးသှငျးကာ တဈဂိုး ဖနျတီးပေး ခဲ့ပွီး ပွိုငျဘကျ နောကျတနျးကို တဈပှဲလုံး ခွိမျးခွောကျမှုတှေ ပေးခဲ့ပါတယျ။
နမောဟာ ဆိုရငျလညျး ခွကေငျြးဝတျ ဒဏျရာကွောငျ့ ၃ လကွာ အနားယူ ခဲ့ရာက ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးက ကိုလံဘီယာ နဲ့ ၂ ဂိုးစီ သရကေခြဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ ဘရာဇီး အတှကျ ဂိုးသှငျးပေး နိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီတှကေ စှမျးဆောငျခကျြတှေ အရ စတားလငျးဟာ နမော အမြားကွီး သာတယျလို့ ကကျဈကာရီနိုက ဆိုသှား ပါတယျ။
ကကျဈကာရီနို က “နမောလား စတားလငျးလား – ခငျဗြား ဘယျသူ့ကို လိုခငျြသလဲ ? ကစားသမား တဈဦး အနနေဲ့ ကြှနျတျော စတားလငျးကို အလို ရှိပါတယျ။ နမောရဲ့ ကှငျးပွငျပ နထေိုငျမှု ပုံစံတှကေို လဈြလြူရှု လိုကျတယျ ထားပါဦး။ ကြှနျတျော ကတော့ စတာလငျးဟာ ကှငျးထဲမှာ နမောထကျ တကယျ ပိုကောငျး ပါတယျ။
သူရဲ့ ကိနျးဂဏနျးတှဟော နမောထကျ ပိုကောငျး နသေလို သူဟာ ပီအကျဂြီထကျ ပိုမို ကောငျးမှနျတဲ့ အသငျးမှာ ကစား နတောပါ။ ပှဲအတှငျးမှာ ဘယျဘောလုံးသမား မှ မလုပျနိုငျတဲ့ အရာတှကေို နမော လုပျပွ ခဲ့တာကို ကြှနျတျော မွငျခဲ့ဖူး ပါတယျ။ အလှပွ ဖြျောဖွမှေု ပေးစှမျးတဲ့ ကစားသမား တဈဦးလိုမြိုးပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အသငျး အတှကျ အကောငျးဆုံး ဖွဈမယျ့ ကစားသမား တဈဦး နဲ့ နမော ရဲ့ သှငျးဂိုးနှုနျးလောကျ ဂိုးတှေ သှငျးယူ နိုငျစှမျး ရှိတဲ့ ကစားသမားကို အလို ရှိတယျ ဆိုရငျ စတားလငျးဟာ ခငျဗြားစိတျကွိုကျလူ ပါပဲ။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ။
စတားလငျးနဲ့ နမော တို့ဟာ တောငျပံ တိုကျစဈတှမှော ကစား ကွသူတှေ ဖွဈပမေယျ့ အင်ျဂလနျ လကျရှေးစငျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ပီအကျဂြီစတားထကျ သှငျးဂိုး ဂိုးဖနျတီးမှုတှေ ပိုမို လုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါအပွငျ စီးတီးဟာ အင်ျဂလနျ ပွညျတှငျး ဖလား ၃ လုံးစလုံးကို သိမျးပိုကျ နိုငျခဲ့တာကွောငျ့လညျး စတားလငျးဟာ ဆုဖလား ရယူမှု အပိုငျးမှာလညျး နမောထကျ သာနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး နမောဟာ ဒဏျရာ ပွသနာတှကွေောငျ့ စတားလငျးထကျ ပှဲထကျဝကျ နီးပါး လြော့နညျးပွီး ကစား ခဲ့တာကိုတော့ ထညျ့စဉျးစား ရမှာပါ။
နမောဟာ ပီအကျဂြီကို ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့ပွီးနောကျ ဒဏျရာ ပွသနာတှနေဲ့ တောကျလြှောကျ ရုနျးကနျ ခဲ့ရပွီး အဲဒီအခြိနျအတှငျး ရာဟငျစတာလငျးဟာ နညျးပွ ပကျဂှာဒီယိုလာ ရဲ့ လကျအောကျမှာ တဈရာသီထကျ တဈရာသီ ပိုမို ထှနျးတောကျ လာခဲ့ပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး ကတျဈကာရီနိုက “သူဟာ ကမ်ဘာ့ထိပျတနျး ကစားသမား ၅ ဦး ထဲမှာ ပါဝငျတယျလို့ ကြှနျတျော အခိုငျအမာ ဆိုခငျြပါတယျ။ စတားလငျးနဲ့ ပကျသကျပွီး ကြှနျတေျာ့ကို ဈိတျလှုပျရှားစတော ကတော့ သူ့ရဲ့ တိုးတကျမှုပါ။ ဒရမျမာဆနျဆနျ တိုးတကျမှုလို့တောငျ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ခငျဗြား သူ့ကို မနကျဖွနျ အပွောငျးအရှေ့ စြေးကှကျထဲကို ခလြိုကျမယျ ဆိုရငျ မနျခကျြစတာစီးတီးဟာ သူ့အတှကျ ပေါငျသနျး ၁၅၀ ပေးရငျတောငျ ယူမှာ မဟုတျပါဘူး။ အကယျ၍ သူ ဒီလို ပုံစံအတိုငျးသာ တိုးတကျနအေုံးမယျ ဆိုရငျ သူဟာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကစားသမား တဈဦး ဖွဈလာ နိုငျပွီး ဘလှနျးဒီအော လမျးကွငျေးပျေါမှာလညျး ရှိလာနိုငျ ပါတယျ။
အကယျ၍ သူ မနျခကျြစတာစီးတီး နဲ့ အတူ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ဆှတျခူးပွီး ကွီးမားတဲ့ အစိတျအပိုငျး တဈခု အနနေဲ့ ပါဝငျ ခဲ့မယျ..ပွီးတော့ ရာသီတဈလြှောကျလုံး ဂိုးတှေ အမြားကွီး သှငျးယူ နိုငျခဲ့မယျ ဆိုရငျ သူဟာ ဘလှနျးဒီအောဆုကို ဆှတျခူး နိုငျဖို့ အရမျး ကောငျးတဲ့ အခှငျ့အရေး ရသှား ပါလိမျ့မယျ။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ။